ဘလူးတုသ်အော်တို Connect ကို APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဘလူးတုသ်အော်တို Connect ကို
ဘလူးတုသ်အော်တို Connect ကို APK ကို
ဘလူးတုသ်အော်တို Connect ကိုသင်၏အဘလူးတုသ်မီဒီယာအသံ (A2DP) မှအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နဲ့ audio (နားကြပ်) ကွန်နက်ရှင်ပြဿနာတွေကိုခေါ်ပါ။ ဒါဟာအလိုအလျှောက်ဘလူးတုသ်ကိုဖွင့်ထားပြီးသည့်အခါသို့မဟုတ်သင့် device ကို screen ပေါ်မှာသွားသည့်အခါသင်၏အဘလူးတုသ်ကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။
ပထမဦးစွာချိတ်ဆက်နှင့်တွဲသင်၏ဘလူးတုသ်ကိရိယာနှင့်အတူကိုယ်တိုင် (ဒီတစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်) နှင့်ထို့နောက်ရုံကို turn off နဲ့ Bluetooth အပေါ် (သို့မဟုတ်စွန့်ခွာ Bluetooth ကိုပေါ်နှင့်အပေါ်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်) နှင့်ကအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။
။ အော်တိုအားလုံး devices များ ချိတ်ဆက်.
။ သင့်ရဲ့ device များဦးစားပေး
။ တချို့ devices တွေကို Disable
။ shortcut ထောက်ခံမှု
။ အပေါ် Screen
။ မီဒီယာအသံ (A2DP)
။ ခေါ်ရန်အသံဖိုင် (နားကြပ်)
။ Tasker ပေါင်းစည်းမှု (Tasker နေတဲ့ task)
။ အသံသတိပေးချက် (ကအကြောင်းကြားသံ play)
။ advanced settings
။ ဆိုက်ကပ်သည့်အခါအပေါ် Bluetooth ကိုဖွင့်ပါ
။ Tasker နှင့်ဒေသခံ plugin ကို
။ Samsung က S3 နှင့်အခြားသူများများအတွက်သင့်လျော်သော
။ အော်တို mode ကိုနှင့်အတူလိုအပ်သည့်အဘယ်သူမျှမ configuration များ
သင့်ရဲ့ Bluetooth ကိရိယာနှင့်အတူပထမဦးဆုံးစုံတွဲဖို့သတိရပါနှင့်ကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်ပါ။ devices တဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီ app မရှိဘဲချိတ်ဆက်နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
ထိုမှသာကပေါ်ကဘလူးတုသ်လှည့်ပြီးနောက်အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီ app အစပျိုးခြင်းဘလူးတုသ်အဆိုပါချွတ်ပြည်နယ်ကနေဖွင့်ထားပြီးအပြီးသာအလွန်ယခုအချိန်တွင် (ဆက်သွယ်မှုစတင်) ။
အင်္ဂါရပ်အပေါ်မျက်နှာပြင်သည်သင်၏ဘလူးတုသ်ပြီးသားကိုဖွင့်လျှင်အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည် screen ပေါ်မှာလှည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌ app ကိုအလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်မြင်ကွင်းနှင့် Tasker သို့မဟုတ်ဒေသခံများ၏လိုအပ်မှုမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သင့်ကြောင်းတစ်ဦးကအလွန်ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိဖြေရှင်းချက်။
ပါဝါကိုချိတ်ဆက်အင်္ဂါရပ် device ကိုပါဝါ (charger ကို) ချိတ်ဆက်အခါအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် slick option ကိုဖုန်းများအတွက်အားလုံးစာရင်း enabled နှင့်ဦးစားပေး devices တွေကိုချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားရန်တစ်ဦးယန္တရားပေးပါသည်။ သငျသညျအလိုအလျောက်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများမှအများကြီးကိုချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်တဲ့အခါဒီအထူးအသုံးဝင်သည်။
အဆိုပါ Tasker နှင့်ဒေသခံ plugin ကိုထောကျပံ့သငျသညျ Tasker သို့မဟုတ်ဒေသခံများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုမိုမှော်ဖျော်ဖြေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ device ကို connection (ဥပမာအားဖြင့်အဘို့သင့်တေးဂီတအက်ပ်ကိုစတင်ဒီကိုသုံးပါ) အခါအလိုအလျောက် Tasker တာဝန်ကိုဖွင့်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုသိပါစေ။ သေချာသင်ဘလူးတုသ် (သာတခါလာသောအခါ BT status ကိုအပြောင်းအလဲများအပေါ်ဖို့ OFF ထံမှ) ကိုဖွင့်ထားပြီးအပြီးပြီးသားတခြားစက်များတစ်ဦးချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအစပျိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောဤ app ကို၏ရည်ရွယ်ချက်နားလည်ပါစေ။
ဒီ tool ကိုဖန်တီးအဓိကအကြောင်းပြချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Samsung ရဲ့ S3 (နှင့်သင်တန်းအခြား devices များ) နှင့်နောက်ကျောတစ်ယခင်ကတွဲ A2DP / နားကြပ်ကိရိယာကိုချိတ်ဆက်ရန်၎င်း၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၏ဖြစ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်: ရှေ့မှာမတည်ရှိခဲ့ပါဘူးရသောအထောက်အထားမဲ့ API ကိုအသုံးပြုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ app 3.0 မတိုင်မီအန်းဒရွိုက်ဗားရှင်း ported မရနိုင်ပါ။ ဒါဟာ 2.3 ပေါ်နှင့်မတိုင်မီအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှင်းရှင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။
THE app အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သော ANDROID BLUETOOTH ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်သည် (IE ကို။ ကိရိယာတွင်ဤ APP ကိုမရှိဘဲနဲ့အချင်းချင်းဆက်သွယ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိရမည်) ။ အိုင်တီတခြားဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ A2DP OR နားကြပ်ကိရိယာကိုချိတ်ဆက် Drop သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မှုမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူး။
လက်ရှိ CURRENT VERSION: 2.8.0
ANDROID တောငျး: 3.0 နှင့်တက်
မေလ 31, 2017 မှာ 1: 51 ညနေ
မတ်လ 21, 2017 မှာ 2: 58 နံနက်
ဒီ2PS4 နဲ့ controller ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသလား?
မာရိသညျ amaya says:
မေလ 2, 2017 မှာ 6: 22 ညနေ
မေလ 8, 2016 မှာ 8: 32 နံနက်
သင့်ရဲ့ apk အလွန်ကောင်းလှ၏, ဘယ်လိုသင်တစ်ဦးကဘလူးတုသ် 3.0 ချိတ်ဆက်နိုင်သလဲ သင် source code ကိုဝေမျှနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ဇွန်လ 3, 2014 မှာ 4: 51 ညနေ
juel roseira says:
ဧပြီလ 1, 2014 မှာ 3: 32 ညနေ
ငါ coll င်လျှင်ကြည့်ကြကုန်အံ့, ယခုဒေါင်းလုပ်ပေါ့ !!!
ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2013 မှာ 11: 02 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 12, 2013 မှာ 12: 48 ညနေ
ငါကဖြင့် download လျှင်သေချာမဖြစ်ကြောင်းကို, ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်စွာဒေါင်းလုပ်လုပ် ??? အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ link တစ်ခုပေးပို့ကျေးဇူးပြုပြီး ... "JJ ... "